Sidatan sameey haddii aad xannuunsato, is-dhaawacdo ama u baahato talo xiriir la leh caafimaadkaaga - Landstinget Sörmland
هذا ما تقوم به إذا صرتَ مريضاً، أو تعرضتَ لحادث أو كنت في حاجة إلى الاستشارة بخصوص صحتك
Sidatan sameey haddii aad xannuunsato, is-dhaawacdo ama u baahato talo xiriir la leh caafimaadkaaga
What to do if you become ill, injured or need general health advice
Patient Data Act for safer care
Information for patients regarding ear, nose and throat surgery
Waxaa dhacdo xaalado usan qofka garanayn waxa u sameeyo markii u xannuunsado. Hoos ka akhriso siyaabaha caawinaadda lo helo.
Rugta daryeel-caafimaadeedka – waa goobta ugu horeeyso ee loola xiriiro
Dhibaatooyinka-caafimaadeed ee aan u baahnayn daryeelka degdegga ee isbitaalka waxaad kala xiriiri kartaa rugta daryeel-caafimaadeedka. Haddii loo baahdo takhtarrada rugta ayaa takhtar aqoon gaar u leh cudurkaaga ku gudbin doono. Talo-bixin awgeed ayaa rugta daryeel-caafimaadeedka loogu xiriiri karaa khadka taleefanka. Xaaladaha qaarkood waxaa suurtagal noqon karto in hoyga lagugu soo booqdo.
Heeganka daryeel-caafimaadeedka koowaad
Haddii aad la dhibaataysan tahay dhibaato-caafimaadeed u baahan in durbadiiba wax laga qabto, taasoo ku soo beegan tay maalin sabti, axad ama fasax/ciid ah, waxaad la xiriiri kartaa Heeganka daryeel-caafimaadeedka koowaad. Gobolka waxaa ku yaalaan Heeganka daryeel-caafimaadeedka koowaad, kuwaasoo tiradooda ah afar. Ballanka waxaad ka qabsan kartaa adigoo waca 1177.
Shabakadda internetka www.1177.se waa goobta aqoonta, waxaad ka heleysa xaqiiqda iyo taloooyinka xiriirka la leh daryeel-caafimaadeedka, caafimaadka iyo cudurrada. Isla goobtaas waxaad ka heli kartaa adeegyada elektroonikada ku salaysan, kuwaasoo tusaale ku cusboonisin karto ruqsadaha daawada lagu iibsado, ballan qabsasho ama ballan ciribtirid.
Talo-bixinta ammuuraha daryeelka bukaanka awgiis ayaa wici kartaa 1177. Kalkaalisooyinka caafimaadka oo aqoon heer sare leh oo ka hawlgala Talo-bixinta ammuuraha daryeelka bukaanka ayaa dhibaatada qiimaynaayo, talo ku siinaayo, iyo haddii loo baahdo warbixin meesha aad caawinaad kala xiriir karto.
Rugta daryeel-caafimaadeedka degdegga
Wac 112 ama booqo rugta daryeel-caafimaadeedka degdegga haddii ay jirto xaalad halis ah.
Inlagd av: Thomas Andersen Senast uppdaterad: 2013-06-10